Umgaqo-nkqubo wabucala kunye noMgaqo-nkqubo weKuki | RayHaber
ikhayaRayHaberUmgaqo-nkqubo weMfihlo kunye nePookkie Policy
Umgaqo-nkqubo weMfihlo kunye nePookkie Policy
RayHaber Wamkelekile kwiWebhusayithi,
Esi Sivumelwano “seMfihlo” silandelayo, RayHaberilawula ubonelelo lolwazi kunye neenkonzo ezinikwa abasebenzisi bethu abaxabisekileyo.
RayHaberNgamana ukusebenzisa ulwazi oluqokelelwe kubasebenzisi ababhalisiweyo kunye neendwendwe abatyelela indawo yeWebhu ngalo naluphi na uhlobo lohlalutyo. RayHaber Yabelana ngolu lwazi namaqabane oshishino. Nangona kunjalo, i-imeyile kunye nolunye ulwazi lomntu aziyi kwabelwana ngalo naliphi na iqabane, inkampani, umbutho okanye nawuphi na umbutho ngaphandle kwemvume yomsebenzisi.
RayHaber I-imeyile, igama, ifani, inombolo yomnxeba kunye naluphi na ulwazi olungeniswe ngexesha lobhaliso aluyi kupapashwa kwiWebhusayithi yabasebenzisi ababhalisiweyo kunye neendwendwe;
RayHaber I-3 iya kudiza kuphela ulwazi lwakho lomntu phantsi kwezi meko zomthetho kunye neenkqubo zomthetho. kuvula imibutho.
a.) Ukuba kukho isicelo esibhaliweyo esivela kumagunya omthetho,
b.) RayHaberukukhusela kunye nokukhusela amalungelo epropathi
c.) Ngokuhambelana nemigaqo owamkelayo phantsi kwemiqathango yokusetyenziswa.
RayHaberUlwazi lwakho lomntu olugcinwe lubonakala kuwe kuphela. Olu lwazi alusathengiswa, kuqeshwa okanye kutshintshwa nelinye iziko okanye umbutho. Ngaphandle kokuba kubonelelwe kwesi "Sivumelwano seMfihlo", 3. ayabelwanga nabantu. RayHaber ithatha onke amanyathelo afanelekileyo ukuzalisekisa iimeko ezithenjisiweyo kule khontrakthi.
RayHaber ulwazi olugcinwe kwindawo ekungekho bantu kuyo. RayHaberisebenzisa zonke iintlobo zemigangatho yemizi-mveliso ukukhusela ulwazi kwindalo esingqongileyo.
Unelungelo lokuhlaziya kwaye uguqule naluphi na ulwazi lwakho olufaka ngexesha lokubhalisa nangaliphi na ixesha. RayHaber Unelungelo lokucima okanye ukunqumamisa iakhawunti yakho ukuba ngaba awuphumeleli ukuthobela esi “Sivumelwano sokugcina imfihlo” kunye “neMvumelwano yeNkonzo”.
Ngenxa yobume be-Intanethi, ulwazi lungasasazwa kwi-Intanethi ngaphandle kwamanyathelo okhuseleko afanelekileyo kwaye anokufunyanwa kwaye asetyenziswe ngabantu abangagunyaziswanga. Umonakalo obangelwe kukusetyenziswa kunye nokusetyenziswa RayHaberayiloxanduva lwe.
Le Webhsayithi ikubonelela ngezinye iiwebhusayithi. Ukufihlakeleka kusebenza kuphela kule Webhusayithi kwaye ayifaki ezinye iwebhusayithi. Umgaqo-nkqubo weMfihlo kunye neMigqaliselo yokuSebenza kwamaziko anxulumene nokusetyenziswa kwezixhumanisi kule webhusayithi kunye nezinye iiwebhusayithi ezisetyenzisiweyo ziyasebenza. Kunconywa ukuba ufunde iMgaqo-nkqubo Yobumfihlo kunye neMigqaliselo yokuSebenzisa imiqathango yalezo ziza kwizinye iwebhusayithi ezihamba kunye nale khowudi kule Webhusayithi.
Ulwazi lomntu siqu okanye inkampani, idilesi ze-imeyile, iinani kunye namaprofayili abavakatyelayo abathengi bethu abasebenzisa izibonelelo zethu ababelwana ngazo nabasithathu nganoma iyiphi indlela.
Iimpawu zeeSayithi zigcinwa ziyimfihlo ngaphandle kwezicelo ezingenziwa ngamashishini aseburhulumenteni (Ofisi kaMtshutshisi kaRhulumente, i-Office Informatics Bureau). Iifowuni zokufikelela zigcinwa ngeentsuku ze-180.
Amagqabantshintshi endwendwe, ulwazi lobulungu bendwendwe, ulwazi lokundwendwela (i-IP, ixesha lokuma, iseragent) zigcinwa ziyimfihlo kubandakanya nabasebenzi beNkqubo yeNdaba.RayHaber unelungelo lokutshintsha naluphi na ulwazi olukwisicatshulwa. Ngokusebenzisa le ndawo, uthathwa ukuba wamkele naluphi na naluphi na utshintsho olwenziweyo kwesi siQinisekiso saBucala.
Iikopi zazo zonke iintlobo zomxholo njengekhowudi, iindaba, imifanekiso, udliwanondlebe RayHaber.com. RayHaberOnke amanqaku, izixhobo, imifanekiso, iifayile zokumamela, oopopayi, iividiyo, uyilo kunye nolungiselelo kwindawo ye .com ikhuselwe ngumthetho welungelo lokushicilela i-5846. la RayHaber.com ayinakotshwa, isasazwe, iguqulwe, ipapashwe nangayiphi na indlela ngaphandle kwemvume ebhaliweyo ye .com. Ikopi kunye nokusebenzisa akunakwenziwa ngaphandle kwemvume kwaye ngaphandle kokuchaza umthombo.
RayHaber buhlonipha ubumfihlo bakho kunye neendwendwe zakho kwaye uthembisa ukulandela imigaqo ebekwe koku kulandelayo.
© Copyright 2020 RayHaber.com onke amalungelo agciniwe.
Iindlela zikaloliwe ziguqulwe zaba ngumgaqo-nkqubo wombuso…
UMphathiswa u-Arslan: "UMgaqo-nkqubo kaRhulumente woLoliwe"
Izitimela zaba ngumgaqo-nkqubo kaRhulumente
I-Kastamonu castle-Clock Tower Cable Car Case Inin
I-TCDD kunye ne-TCDD yezoThutho Inc. UkuFikelela kokuQala phakathi kwe…
Inkontileka ye-1915 Çanakkale Bridge
27 kwiShishini loThutho. Isivumelwano sokuThunywa kweeNkcukacha zoQhagamshelwano
Contractanlıurfa-Gaziantep Isantya soPhakamiso lweSitimela seProjekthi…
Isivumelwano soBasebenzi esibambiseneyo esisayinwe phakathi kwe-MOTAŞ no-Hak-İş
Ikhontrakthi yeProjekthi yeSapanca Teleferic iya kusayinwa namhlanje
I-Contract Implementation ye-Alaçatı Airport
IsiVumelwano esiDityanelweyo sokuBonisana phakathi kweSamulaş kunye neDemiryol-İş…
Isivumelwano sokuBambisana sabaSebenzi esibhalwe kwi-İZBAN
Iimpawu zeAselsan I-110 Million Isivumelwano seMetro Metro
I-Contract ye-ULAK yeState Supply